Waa sidee xaalada magalada Kismaayo xarunta Gobalka Jubbada hoose (Sawirro) | Puntland Today
Waa sidee xaalada magalada Kismaayo xarunta Gobalka Jubbada hoose (Sawirro)
Posted on September 8, 2016 by Dal Joog
Kismaayo oo ah Caasimadda saddexaad ee Soomaaliya, xarunta Gobalka Jubbadda hoose iyo caasimadda KMG ah ee Jubbaland ayaa saddexdii sanno ee lasoo dhaafay samaysey isbadal xagga horumarka, is dhexgalka shacabka iyo ammaanka.
Waxay ka kooban tahay 1:Calanleey 2:Farjano 3Faanole 4:Shaqaalaha 5:Guulwade, xaafadahaasi oo badankood facweyn waxaa hoos yimaada laamo kale oo hadda dhismaya, dhalinyarada ayaa ku mashquulsan waxbarasho iyo iney meel iska soo saaraan.
Kismaayo waxay ku tiirsan tahay wax soo saarka xeebta, xoolaha, beeraha iyo illaha kale sida Dekadda iyo Garoonka diyaaradaha, Mamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo madaxwayne Axmed Madoobe ayaa dadaalkiisa isigu geeyay adkeynta ammaanka maadama Kismaayo marxalado kala duwan soo martey una baaahan tahay dib u dhis xooggan iyo maalgashi.
Fursadaha ila muuqda iney banaan yihiiin waxay kala yihiin hirgalinta goobo lagu caweeyo fiiidkii sida Muqdisho oo kale, xarumo ganacsi sida Mall waa weyn. Garoomada roogaga leh ee habeenkii kubadda lagu ciyaaro iyo xarumo dalxiis oo xeebaha laga hirgaliyo maadama Kismaayo ay ku taalo dhowr xeebood oo ay ka mid yihiim Calanleey, Liido iyo Kiboora. Waxaa socda isbadal xoog ku socda waxaa la dajinayaa qorshe lagu qaabeynayo bilicda iyo waddooyinka magalada.